Nagu saabsan - Morsun LED
Bogga ugu weyn > Magaca Morsun
Iyada oo ku saleysan Guangzhou, Shiinaha, Guangzhou Morun Technology Co., Ltd waa mid ka mid ah hoggaamiyeyaasha hogaaminaya nalka hore ee baabuurta iyo alaab-qeybiyeyaasha Jeep, mootooyinka iyo gawaarida xamuulka iwm.
Waxaan u hoggaansameynaa ISO9001: 2000 Heerka Nidaamka Maareynta Tayada. Inta badan nalalka nalagu hogaamiyaa waxay leeyihiin shahaadooyinka CE, RoHS iyo TUV oo la ansaxiyay. Waxaan haynaa koox cilmi baaris wax soo saar leh oo codsi LED ah & koox horumarineed oo ka kooban khubarada indhaha, korontada, kuleylka iyo qaabdhismeedka. Waxaan ku maalgelinay malaayiin doolar dhisida is-weydaarsiga wax soo saarka ma guurtada ah iyo boodhka aan lahayn.
Iyadoo la adeegsanayo naqshad muraayadaha indhaha iyo kuleylka ah, waxaan qaadaneynaa booska hoggaamineed ee warshadaha Jeep laydhadhka hore ee laydhka, laydhka ceeryaanta ee hogaamiya, nalalka dabo la hogaaminayo, laydhadhka shaqada oo la qabto iyo baararka iftiinka leh iwm Waxaan nahay soo saare xirfadlayaal ah, shirkadeeye iyo dhoofiyaha nalalka LED-ka ee aagga. Tayada wax soo saarka, hal-abuurnimada, tikniyoolajiyadda iyo adeegga macaamiisha ayaa naga dhigay mid ka mid ah hoggaamiyeyaasha aan muranka ka taagnayn adduunka oo dhan xagga nalalka LED-ka. Qaadashada fikradda ah "Tayada Koowaad, Macaamiisha Ugu Muhiimsan, Daacadnimo iyo Hal-abuurnimo" maskaxdeena, shirkadeena waxay ku guuleysatay horumar weyn sanadihii la soo dhaafay.
Macaamiisha ayaa lagu soo dhaweynayaa inay iibsadaan alaabteenna caadiga ah, ama ay noo soo diraan codsiyada oem. Waxaad la dhici doontaa tayadeena iyo qiimaheena. Fadlan hadda nala soo xiriir!